Lufthansa dia ahafahana miditra haingana amin'ny alàlan'ny taratasy fanamarinana ny vaksiny niomerika
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Lufthansa dia ahafahana miditra haingana amin'ny alàlan'ny taratasy fanamarinana ny vaksiny niomerika
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Fotoana ara-potoana hanombohana ny fialantsasatry ny sekoly fahavaratra any Hesse: ahafahan'ny Lufthansa miditra haingana miaraka amin'ny taratasy fanamarihana ny fanaovana vaksiny niomerika
Ara-potoana hanombohana ny fialantsasatry ny fahavaratra an-tsekoly Hessian, ny mpandeha miaraka amin'ny taratasy fanamarinana ny vaksiny niomerika dia afaka manamarina haingana kokoa miaraka amin'i Lufthansa ary mahazo ny pasiterany.
Fandraisana an-tsoratra haingana sy mora kokoa miaraka amin'ny mari-pahaizana momba ny vaksiny tsy ho ela amin'ny alàlan'ny smartphone.
Fanamarinana mialoha ny mari-pankasitrahana avy amin'ny Ivotoerana Serivisy Lufthansa azo atao mandritra ny 72 ora alohan'ny fiaingana.
Ara-potoana fotsiny hanombohana ny fialantsasatry ny sekoly fahavaratra any Hesse.
Ny ampahefatry ny mponina alemanina izao dia vita vaksiny indroa hanohitra ny COVID-19. Andro vitsivitsy izao, ny fivarotam-panafody, ny dokotera ary ny ivon-toeran'ny vaksiny dia namoaka kaody QR ho an'ny olona vita vaksiny, ilay taratasy fanamarihana vaksinina nomerika.
Ara-potoana fotsiny hanombohana ny fialantsasatry ny fahavaratra an-tsekoly Hessian, ny mpandeha miaraka amin'ny taratasy fanamarinana ny fanaovana vaksiny niomerika dia afaka manamarina haingana kokoa miaraka amin'ny Lufthansa ary raiso ny pasiterany. Ity ny fomba fiasan'izy io: ny mpitsangatsangana dia manolotra ny taratasy fanamarinana ny fanaovana vaksiny niomerika, izay manaporofo ny fiarovana ny vaksiny feno, na amin'ny alàlan'ny app na amin'ny pirinty amin'ny fisavana ao amin'ny seranam-piaramanidina. Eo dia vakiana ary ny pass pass dia avoaka mivantana ary tsy misy fahasarotana. Io dia manafoana ny filàna taratasy sy porofo isan-karazany mankany amin'ny seranam-piaramanidina. Izy io koa dia manasarotra kokoa ny fampiasana tsy ara-dalàna ireo taratasy fanamarinana fanaovana vaksiny sandoka, satria mampitaha ny angona avy amin'ny kaody QR amin'ny rafitra famandrihana sy ny angona momba ny mpandeha ny rafitra.
Amin'ny ho avy, ny fidirana an-tariby amin'ny alàlan'ny finday avo lenta dia ho haingana kokoa ihany koa: Amin'ny làlana voafantina, tsy ho ela dia azo atao ny manamarina ireo taratasy fanamarinana vaksinin'ny QR miaraka amin'ny app Lufthansa na mampiditra azy ireo am-paosy anaty fampiharana. Manaiky ny kaody QR ny fampiharana ary mampiasa an'ity fampahalalana ity hamoronana pasipaoro.
Izay rehetra manahy fa tsy manana mari-pankasitrahana marina amin'ny dia izy ireo dia afaka manamarina azy ireo avy amin'ny Lufthansa Service Center amin'ny sidina voafantina hatramin'ny 72 ora alohan'ny hiaingany. Ireo dia mety ho porofon'ny fitsapana, tafavoaka velona tamin'ny aretina COVID-19 ary ankehitriny dia vaksiny. Ny fanamafisana ny fisoratana anarana nomerika dia azo zahana amin'ity fomba ity ihany koa. Ny zotram-piaramanidina dia manome soso-kevitra ny hanohizan'ny vahininy ireo mari-pankasitrahana vita pirinty tany am-piandohana, ho fanampin'ny porofo niomerika, mandra-pahatongan'ny fampandrenesana manaraka.